एजेन्सी । हङकङ विश्वविद्यालयमा काम गर्ने क्रममा ली मेन्ग यानले कोरोनाबारे अध्ययन गर्ने टिमसँग सुरुवातदेखि नै रहेकी थिइन् । उनले ओपन एक्सेस रिपोजिटरी बेवसाइ६ जेनोडो मा भाइरससँग सम्बन्धित प्रमाण प्रकाशित गरेकी छन् । उनले तीन जना अध्ययनकर्तासँग मिलेर काम गरेकी हुन् । विस्तृतमा
विचित्र विश्व ट्रेण्डिङ्ग
श्रीमतिलाई कसरी खुसी पार्ने, यस्तो छ उपाय
अर्जेन्टिनाबारे अजबगजबका कुराहरु !
पर्यटकहरुका लागि पनि एक सुन्दर गन्तव्य हो अर्जेन्टिना । मासु खपत, ट्यांगो डान्सिङ, विविध कल्चरले भरिपुर्ण छ अर्जेन्टिना ।
बच्चा छैन ? कर तिर्नुस !
चीनका दुई जना विज्ञले चिनियाँ नागरिकलाई जवरजस्ती बच्चा जन्माउने गराउन एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका छन् ।
विश्वकै तेज दिमाग भएका व्यक्तिहरु ?
मस्तिष्क शरिरको मुख्य तथा अत्यन्तै नबुझिने भाग हो । हाम्रो पहिचान बनाउन हाम्रो मस्तिष्कको ठुलो भुमिका रहेको हुन्छ ।
२०० वर्ष पूरानो बेश्यालयः धेरै महिला त्यहि जन्मिन्छन्, त्यहि हुर्किन्छन् र त्यहि हराउँछन्
एजेन्सी । बंगलादेशमा विश्वको त्यस्ता मुस्लिम राष्ट्रहरुमा पर्छ, जहाँ बेश्याबृत्तिलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । बंगलादेशमा टंगेल जिल्लामा रहेको सबैभन्दा पुरा बेश्यालय हो कन्दापारा बेश्यालय ।
नेपालका भ्रमण गर्दा छुटाउनै नहुने विशेष खानेकुराहरु...
नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुले खानछुटाउनै नहुने खानाहरुको बारेमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसिएनएनले आठ थरी खानाहरुको सूचीतयार पारेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा कडा कानुन भएका देशहरु !
लागुपदार्थको सेवन र ओसारपसारले हरेक देशको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नको लागि हरेक देशमा कडा कानुन समेत बनाइएको छ ।
यी हुन् सन् २०१८ मा बस्न अयोग्य १० सहर
सर्वेक्षणका अनुसार गत वर्ष करिब आधा सहरहरूले बस्न योग्यको सूचीमा सुधार गरेको देखिएको छ। यो वर्ष दोस्रो स्थानमा रहेको मेल्बर्न पहिले सात वर्षसम्म पहिलो स्थानमा रहेको थियो।
चीनले नदीमाथि नै बनाइदियो राजमार्ग
एजेन्सी । चीनले यस्तो अजबगजबको काम गरेर विश्वलाई नै आश्चर्य चकित पारिदिएको छ । अजब गजबको काम गर्दै आइरहेको चीनले पछिल्लो समय नदीमाथि नै राजमार्ग बनाइदिएको छ ।
जब श्रीमतीले डिभोर्स मागिन्
आइसा धन्नुपाआ नाम गरेकी एक महिलाले विवाह गरेको एक हप्ता नबित्दै आफ्नो श्रीमानसँग डिभोर्स पाउ भन्दै अदालतमा उजुरी दायर गरेकी छिन् ।
ब्रेकअप भएपछि युवतीहरु कस्ता कस्ता हर्कत गर्छन् ?
माया एउटा मिठो आभास हो । कसैको मायामा परिन्छ भने एक झलक पाउन पाए संसार जितेजस्तै भावनाहरु मनमा बारम्बार आइरहन्छन् ।
एजेन्सी । दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ भन्ने शात्रमा उल्लेख छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन। तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ। शास्त्रले यस्ता कुराहरुलाई सिरानीमुनी राख्नु राम्रो हुने भनेर उल्लेख गरेको छ ।
यसरी प्राकृतिक तरिकाले स्वस्थ राख्नुहोस् किड्नी